Adobe ayaa ku cusbooneysiisa Photoshop xulashada Mawduuca la hagaajiyay | Abuurista khadka tooska ah
Adobe ayaa ku cusbooneysiisa Photoshop warar muhiim u ah nooca desktop-ka
Saacado uun kahor Adobe ayaa ku dhawaaqday cusbooneysiin waaweyn oo ku saabsan buugyaraha waaweyn ee barnaamijyadeeda ku hoos qoran 'Cloud Cloud'. Qoraalkan waxaan uga hadlaynaa kuwa ku yimaada Photoshop qaabkooda desktop.
Maaddaama Adobe sifiican u xustay, tani waa qaababka ugu ballaaran ee laga keenay Adobe MAX shirkii 2019. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah in la xuso horumarinta "sixirka" mashiinka oo laga barto Adobe Sensei iyo hagaajinta socodka shaqada si loo yareeyo waqtiga wax soo saar hal abuur leh. U tag.
Adobe ayaa dhigay dhammaan hilibka dabka ku jira si ay si weyn u wanaajiso hawsha Xulista Mawduuca in si weyn kor loogu qaado natiijooyinka xulashada otomaatiga ah.
Waxaan arki karnaa horumarka weyn ee ku saabsan isku xigxiga sawirrada markaa waad arki kartaa sida ay u shaqeysay 2019 iyo sida ay hadda tahay; runti waxaan goob joog uga ahayn xulitaankan weyn Adobe Photoshop Camera sii daayay on Android iyo macruufka usbuucii hore.
Xaqiiqdii way leedahay fiiro gaar ah ayey siisay faahfaahinta timaha sawirro sawir gacmeed ah kuwaa oo badanaa ah faraska dagaal ee ay tahay inaan la dagaallanno markaan rabno inaan xulno asalka sawir.
Mid kale oo ugu fiican Photoshop ayaa ahaa waayo-aragnimada isticmaale ee Adobe Camera Raw. Waxay ku jirtaa interface-ka kaas oo ku dayanaya kan ugu casrisan ee Lightroom ee Camera Raw uu hadda qaato. Iyada oo shaashadaha shaashadda lagu siiyay waxaad ka heli kartaa fikrad dhakhso leh oo ka mid ah horumarkan xagga muuqaalka ah ee ku socda slid iyo inbadan.
Sidoo kale waa inaynaan quudhsan muuqaalka cusub ee waxqabadka tooska ah ee Adobe Fonts markii dukumiinti la furo. Farqiga weyn ayaa ah in markaan hada fureyno dukumiinti oo xarfahaas lawaayay, Adobe Photoshop ayaa si otomaatig ah u raadiya iyaga si aan naloo weyddiin inaan bilowno howshan. Hadda wax waliba waa otomaatig ah.
Ugu dambeyntiina waxaad heysataa laba sheeko oo cusub: qaabab la isku beddeli karo iyo Aqoonsiga xarfaha ee Font Match. Midka hore si dhib ah uma baahna inuu sheego waxa uu qabanayo, tan labaadna waxay awood u leedahay inay aqoonsato ilaha sawirka.
Kuwani waa astaamaha ugu waaweyn ee Photoshop ee nooca desktop-ka ah. Waxaan dhawaan u soo deyn doonaa warka ku saabsan nooca desktop-ka iyo inta kale ee Creative Cloud, ee ha moogaan!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Adobe ayaa ku cusbooneysiisa Photoshop warar muhiim u ah nooca desktop-ka
Sida loo abuuro qaab leh Photoshop
Farshaxanka farshaxanka iyo mandalas: sida hal-abuurnimadu nooga caawin karto inaan ka adkaano diiqadda